Qditor: Video nchịkọta akụkọ nke Windows na mobile ngwaọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Qditor: Video Editor for Windows, A gam akporo na iOS
Mmanya na-egbu egbu | | android, Mobiles, software, Windows
Ọtụtụ ndị na-eche ihe kpatara ụfọdụ ụdị ngwa nwere ike inyere anyị aka - dezie vidiyo ọkachamara na ngwaọrụ mkpanaka, ọnọdụ a na-apụghị ịkọwa akọwa nke na ọ nweghị onye nwere ike ịghọta ma ọ bụrụ na ọgbọ ọhụrụ ha, gụnyere ndị na-arụ ọrụ ike dị egwu na oke RAM.
Ikekwe nkọwa dị na ihuenyo size na a mbadamba (Android ma ọ bụ iPad) nwere ike, n'ihi na -enwe ike inwerekwu ọrụ a na-achọkarị ihuenyo buru ibu karị, dị ka nke kọmputa kọmputa na-enye. Anyị ahụwo ihe na-akpali ngwa na ị nwere ike iji na Windows (n'okpuru ugwo usoro) na kwa, na gam akporo ma ọ bụ iOS mobile ngwaọrụ, nke ikpeazụ ịbụ onye nke kasị mma dị ka ya version bụ kpam kpam free.
1 Etu esi eji Qditor na ụdị ya maka Windows
2 Etu Qditor si aru oru na ekwentị mkpanaaka
Etu esi eji Qditor na ụdị ya maka Windows
Dị ka anyị kwuru na paragraf gara aga, a na-etinye ngwa a iji dezie vidiyo a na-akpọ "Qditor" n'okpuru usoro abụọ dị iche iche, ya bụ, otu ị nwere ike wụnye na kọmputa gị nke Windows ọzọ kama na i nwere ike iji na mobile ngwaọrụ na a dakọtara sistemụ. N'ikwu okwu niile banyere ụdị maka Windows, ikekwe nke a bụ ụzọ ọzọ zuru oke nke anyị hụworo, nke nwere ọnụ ahịa dị oke ọnụ na njikọ nke ngwa ndị ọzọ nwere otu ọrụ ahụ na-esikwa n'aka ụlọ ọrụ dị mkpa (dịka Adobe Premiere o Ikpeacha Ikpeazụ). The price ị ga-akwụ maka a ikike iji ngwá ọrụ a bụ mkpokọta $ 20 dị ka ya ukara saịtị.
Uru nke iji ụdị a dị ọtụtụ, na-enwe ike ịkọwa na mbụenyi na enyi interface ọ nwere. Ọ bụrụ na i jirila ngwa ọ bụla ọzọ dezie vidiyo (dị ka ndị anyị kpọtụrụ aha n'elu) ị ga-enwe mmasị na ngwá ọrụ a, n'ihi na ọ ga-eji ya kesaa ubi nke ọma ebe ọrụ ihe ga-adị.
N'akụkụ nke elu ị nwere mpaghara abụọ kesara nke ọma, nke dị n'akụkụ aka ekpe bụ ebe foto, vidio, faịlụ ọdịyo ga-adị (ụda ụda, egwu, ọkwa, nsonaazụ ụda na ọtụtụ ndị ọzọ) n'etiti ndị ọzọ. N'ebe aka nri kama ị ga-enweta nhụchalụ nke nhọrọ ọ bụla ị mere na mpaghara gara aga. Lee ị nwekwara ohere ịme ka njide nke ngwaọrụ gị, nke nwere ike ịbụ igwefoto vidiyo ma ọ bụ igwefoto dijitalụ ejikọrọ na ngwaọrụ nke etinyekwara na kọmputa nkeonwe.
Na okpuru bụ ebe a ga - eme ihe niile, ebe ọ bụ na e kesara ọwa ole na ole na - edozi nke ọma. N'ihi ya, ị ga-ahọrọ ndị ọcha site n'elu ka ịdọrọ ha iji chọta ha, na ebe nke ha. N'ebe ahụ ị nwere ike iwekota a dị iche iche nọmba nke videos, audios na ọbụna akụkụ dị ka utu aha. Dabere na onye nrụpụta "Qditor", ngwa a nwere ike ibubata ma dezie faịlụ vidiyo na mkpebi nke 1080p.
Etu Qditor si aru oru na ekwentị mkpanaaka
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ mkpanaka gam akporo ma ọ bụ iPad ị nwere obi ụtọ, n'ihi na onye nrụpụta ahụ kpebiri enye a video edezi ngwá ọrụ kpamkpam free maka ndị ọnụ. N'ebe a, anyị na-ahụkwa uru ole na ole iji mee ihe n'agbanyeghị, anyị ga-edo anya na a ga - enwe njedebe ole na ole na ọrụ ya n'ihi akụrụngwa dịịrị ndị otu pere mpe karịa nke kọmputa kọmputa.
Uru dị na iji nchịkọta akụkọ vidiyo na iPad ma ọ bụ na mbadamba gam akporo dị mma, ebe onye ọrụ ahụ ga-amalite ịmalite vidiyo ọ bụla na igwefoto ya ma mesịa mee ụfọdụ mgbanwe, ihe nwere ike ịgụnye ịcha vidiyo, ngwa nke ụfọdụ mmetụta, mwekota nke aha, ndabere ụda n'etiti ole na ole ndị ọzọ. Mgbe vidiyo ahụ gwụchara nwere ike mfe exported na YouTube ọ bụrụ na anyị nwere ọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Qditor: Video Editor for Windows, A gam akporo na iOS
Gịnị bụ Wi-Fi na-akpọ?
Task Manager na Chrome: know maara na ọ dị?